नेपालले ओलीलाई दिंदैछन् यतिठुलो धोका : वैशाख २७ अघि नै एमालेमा उथलपुथल Nepalpatra नेपालले ओलीलाई दिंदैछन् यतिठुलो धोका : वैशाख २७ अघि नै एमालेमा उथलपुथल
नेपालले ओलीलाई दिंदैछन् यतिठुलो धोका : वैशाख २७ अघि नै एमालेमा उथलपुथल
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई उनकै पार्टीको अर्को समानान्तर समूह झलनाथ खनाल-माधव नेपाल समूहले ओलीलाई यतिठुलो धोका दिन ठूलो षडयन्त्र गरेको पर्दाफास भएको छ । नेकपाको खनाल-नेपाल समूह ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो’ हानेर अर्को पार्टीलाई सत्तामा पुर्याउने घिनलाग्दो खेलमा लागेको छ ।
नेकपाको खनाल-नेपाल समूहले आफ्नै घरमा आगो लगाएर के अभिष्ट प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ ? यो प्रश्न आम एमालेका कार्यकर्ताको मनमा उब्जिरहेको छ । नेकपाको खनाल-नेपाल समूह भोलि सिपि मैनाली र मोहन बैद्य जस्तो किनारा लागेर जाने त होइन भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ किनकी नेपालमा पार्टी विभाजन गरेर जाने कुनै पनि राजनीतिक दलको हालत खराव भएको ज्वलन्त उदाहरण सवैसामू छर्लंग देखिएको छ ।
एमालेको उक्त खनाल-नेपाल समूहले वैशाख २७ अघि नै आफ्ना समूहका सांसदले सामूहिक राजीनामा दिएर आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीलाई धोका दिएर कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउने खेलमा सहज बनाउन भर्यांङ हाल्दिन लागेको हो ।
खनाल-नेपाल समूहले ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न र उनकै नेतृत्वमा चुनावमा जान नदिन विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमतमा पुर्‍याइदिने खेलमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न लागेको सूचना प्राप्त भएको छ । खनाल-नेपाल समूहका कम्तीमा २० जना सांसदले सामूहिक राजीनामा दिनेबारे हिजो सोमबारदेखि सघन छलफल शुरू भएको एमालेका नेताले नाम नबताउने सर्तमा नेपालपत्रलाई जानकारी दिए ।
आफूहरूले विश्वासको मत दिए ओली सरकार जोगिने र नदिए पनि जसपाको एउटा पक्षको साथ पाएर ओलीले नै चुनाव गराउने परिस्थिति देखिएपछि खनाल-नेपाल समूह गहन छलफलमा लागेको हो । यस्तो अवस्थामा वैशाख २७ अघि नै एमाले विभाजन भईसक्ने देखिन्छ । वैशाख २७ गते अघि नै सत्तारुढ दल एमालेमा ठूलो उथलपुथल हुने संकेत आंकलन गर्न सकिन्छ ।
तत्कालिन नेकपा भएकै बेला प्रचण्ड-नेपाल गुट बनाएर राजनीतिक रुपमा विभाजन भएको नेकपा र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले साविकको अलग अस्थित्वमा रहेका एमाले र माओवादी केन्द्र पुन:स्थापित भए । यदि एमाले विभाजन भए ‘भाई फुटे, गवार लुटे’ भनेझैँ एमालेको अस्तित्व त संकटमा नै पर्ने निश्चित छ तर नेपाली काँग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा ठूलो चिट्ठा पर्ने देखिन्छ ।
जे भएपनि ‘भाई फुटे, गवार लुटे’ भन्ने नेपाली उखान अनुसार नेकपाको विभाजनले प्रमुख कम्जोर तथा भूमिकाविहीन प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसलाई आगामी निर्वाचन फाइदा पुग्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ भने नेकपाको दुवै समूहको हालत कम्जोर हुने प्रष्ट देखिन्छ ।
तर दुई तिहाई बहुमतको शक्तिशाली सरकार बन्ने सम्भावना नरहेकोले भविष्यमा मिलिजुली सरकार बनाउने र गिराउने खेल हुने देखिएकोले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता हुने देखिनु आम नेपाली नागरिकको लागि बिडम्वना कुरा हुनेछ ।
नेपालका राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरुमा कुनै राजनीतिक नैतिकता देखिदैन । नेपाली जनताको आँखामा छारो हानेर भ्रम सिर्जना गर्ने गरेका सवै राजनीतिक दलका नेताहरुको खोपडीमा सद्वुद्धि कहिले आउने हो ? शक्ति र सत्तामा पाउँदा त्यसकै जयजयकार गाउने सत्ता नपाउँदा त्यसकै चर्को आलोचक हुने नेपाली नेताहरुको पुरानै आनीबानी रहेको समेत राजनीतिक विश्लेषकको विचार रहेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति, सत्ता र शक्तिको होडबाजी गर्ने घिनलाग्दो हर्कत धेरै टिक्ने देखिदैन किनकी बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ । आम नेपाली जनता धेरै शिक्षित र सचेत भईसकेका छन् । राजनीतिक दलका सवै नेताहरुले देखाइरहेको सत्ता मोहले आम नेपाली जनता वाक्कदिक्क भई सकेका छन् ।
माधव नेपालले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चतता खोजेकोले महाधिवेशनमा नेपाललाई अध्यक्षको आश्वाशनको जेन्टलमेन एग्रीमेन्ट गरिदिएर पार्टीलाइ एक बनाउन प्रधानमन्त्री ओली किन तयार नभएको ? २०७५ जेठ ३ भन्दा अगाडिको अवस्थामा फर्किएर एकताको गर्न किन ओलीले भूमिका नखेलेको हो ?
नेपालमा यी दुवै नेताहरुको व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ताको मोहले फेरि नेकपामा सानोतिनो महाभारत युद्ध हुने संकेत देखिदैछ । एमालेका यी दुवै नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र सीमित भएर एकले अर्कोलाई ‘युज एण्ड थ्रो’ गर्ने रणनीति पार्टीको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।
नेपालले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष ओलीलाई अनेक आरोप-प्रत्यारोप लगाएर पार्टी र नेताहरुको बेइज्वत गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । खनाल-नेपाल समूहले बाहिर होटेलमा बैठक बोलाएर समानान्तर कमिटी गठन गर्दै हिड्ने काम तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने देखिन्छ । विभाजनको संघारमा पुगेको एमालेलाई जोगाउनु यी दुवै एमालेका नेताहरुले किन भुल्दैछन् आफ्नो कर्तव्य ?
हुनपनि एउटै खाटमा सुतेपछि कहिलेकाहीं गोढाले लाग्नु स्वाभाविक हो । आपसी समझदारीवाट पार्टीमा देखिएको विवाद समाधान गर्नु देशकै लागि सुखद कुरा हुनेछ । बिगतमा एकअर्काले गरेका गल्ती महसूस गरेर हातेमालो गरेर अघि बढ्नु नै आजको आवश्यकता हो ।